MAITIRO EKUMISIKIDZA PLUTO TV (2021) - NYORO
Maitiro Ekumisikidza Pluto TV
Zvichida chete chinhu chinoita kuti vashandisi vatye kumahombekombe makuru ekushambadzira seNetflix ndiwo marongero anodhura ekunyorera. Nekudaro, ko kana iwe ukagumburwa neapp yaive nezviuru zvemamuvhi nemitambo yeTV mahara. Unogona kumanikidzwa kuregeredza izvi sekuseka, asi muchokwadi, zvinogoneka nePluto TV. Kana iwe uchida kusangana nemazana emaawa emahara-emahara kutenderera, heino gwara rekukubatsira iwe kuona kuti ungamise sei Pluto TV.
Chii chinonzi Pluto TV?
Ini ndinofanira Kugonesa Pluto TV?
Maitiro 1: Activate Pluto TV pane Smartphone
Maitiro 2: Uchishandisa Sevhisi Kupfuura Chromecast
Maitiro 3: Unganidza kuAmazon Firestick uye mamwe ma Smart TV
Pluto TV ndeye OTT yekushambadzira sevhisi yakafanana neNetflix, Amazon Prime, uye Disney Plus. Nekudaro, kusiyana nemasevhisi aya, Pluto TV ndeye mahara zvachose uye inogadzira mari inoenderana neshambadziro. Pamwe pamwe nemazita anokodzera binge, mapuratifomu anopawo 100+ mhenyu TV chiteshi, zvichipa vashandisi yakazara yeTerevhizheni Kuwedzera Cherry pakeke, iyo app inoshandisa zvakanyanya-inoshamwaridzika uye iri nyore kufamba uye inopa vashandisi sarudzo yekusarudza iyo inobhadharwa sevhisi. Kana izvi zvinhu zvichirira zvakanaka zvakakwana kwauri, heino maitiro aungaita batanidza Pluto TV kumidziyo yako.
Kushanda paPluto TV chiitiko chakaomarara zvishoma. Sevhisi yemahara, Pluto haidi kuti ishandiswe kufambisa chiteshi uye kuratidza . Iyo yekumisikidza maitiro aingova ekufananidza akawanda madhijitari uye kushandisa maficha akadai seanofarira uye aifarira mashoo . Kusvikira makore mashoma apfuura, maitiro acho aidikanwa kana iwe waifanira kumhanyisa Pluto TV pane akawanda madhizaini. Paunenge uchimhanya Pluto TV pane chishandiso chitsva, iwe waizowana kodhi pane yako Pluto account. Iyi kodhi yaifanirwa kuiswa pane yako nyowani kifaa kuti ienzanise ese ari maviri.
isa komputa yangu pane desktop
Kamwe Pluto TV payakapa vashandisi sarudzo yekusaina uye kugadzira yavo account, iyo yekumisikidza ficha yave kushaya basa. Naizvozvo, kumisikidza Pluto TV kuri kugadzira account uye kunyoresa sevashandisi vakasimbiswa.
Iyo Pluto TV app inogona kutorwa pasi kubva kuGoogle Play Store yeApple neApp Store ye iPhone. Pluto TV iyi yemahara app uye haidi chero chaiyo yekumisikidza maitiro kuti ishande nemazvo. Zvakangodaro, iwe unogona kugadzira account papuratifomu uye unyore wega semunhu anogara aripo.
1. Kubva kuGoogle Store, dhawunirodha iyo Pluto TV kunyorera pane chako chishandiso.
google chrome haina kukunda kutanga
2. Vhura iyo app uye pombi pa Zvirongwa menyu pakona yepamusoro kurudyi kwechidzitiro.
3.Kunyatso gonesa Pluto TV, tinya pane 'Saina Up Mahara.'
Zvina. Isa mashoko ako papeji rinotevera. Iyo yekusaina-kumusoro maitiro inoda hapana kiredhiti kadhi info, kuve nechokwadi kuti haurasikirwe chero mari.
5. Kana ese info apinda, pombi pamusoro 'Sign-kumusoro, uye yako Pluto TV ichagadziriswa.
Uyezve Verenga: 9 Akanakisa Yemahara Yemahara Ekuparadzira Mapurogiramu
Imwe yedzakanakisa nzira dzekushandisa Pluto TV ndeye kuikanda kuburikidza neChromecast yako uye kuitarisa paTerevhizheni yako. Kana iwe uine chishandiso cheChromecast uye uchida kunakirwa nemhando yepamusoro terevhizheni, heino maitiro aungaite Pluto TV kuburikidza neChromecast.
1. Pane bhurawuza rako, tungamira ku webhusaiti yepamutemo of Pluto TV
2. Kana iwe watogadzira account, Nyorera mu uchishandisa magwaro ako kana kushandisa iyo isina kunyoreswa vhezheni.
3. Kana vhidhiyo yangotambwa, tinya pane matatu matatu kurudyi kweiyo yako Chrome browser.
yemunharaunda nzvimbo yekubatanidza haina huchokwadi ip yekugadzirisa windows 10
4. Kubva pakurongwa kwesarudzo dzinoonekwa, tinya pane 'Kanda.'
5. Dzvanya pane yako Chromecast chishandiso, uye mavhidhiyo kubva kuPluto TV anotamba akananga paTerevhizheni yako.
Paunenge iwe uchinge wanzwisisa izvo zvekutanga zvePluto TV, kuishandisa pane chero chishandiso kunova kwakanyanya nyore. Unogona kudhawunirodha iyo app kuburikidza y yedu Amazon Firestick TV uye mamwe maTV akangwara, uye ichashanda mushe. Nekudaro, kana yako Pluto TV account ikasavhurwa nekungosaina uye iyo app ichikumbira kodhi, heino maitiro aungaite Pluto TV pane yako kifaa.
1. PaPC yako, musoro pasi kune Pluto Inovhura webhusaiti
2. Pano, sarudza Mudziyo iwe unoda kumisa Pluto TV on.
3. Kana mudziyo wasarudzwa, a 6-digit kodhi ichaonekwa pane yako skrini.
4. Dzokera kuterevhizheni yako uye, mune isina chinhu slot, nyora kodhi uchangobva kugamuchira.
5. Uchava kusaina muakaunti yako yePluto TV, uye iwe unogona kunakidzwa nezvose zviratidzwa uye mafirimu emahara.
gadzirisa windows 10 yakakosha kukanganisa
Q1. Chii chinonzi bhatani rinoshanda paPluto TV?
Kushanda paPluto TV kuri kugadzira account uye kusaina sevhisi. Unogona kushandisa zvese maficha papuratifomu nekusaina neakaundi account yako pane akasiyana madhivhosi.
Q2. Ndinoita sei kuti Pluto TV ishandiswe paRoku?
Roku ndeimwe yemapuratifomu ari kuuya eSmart TV anotsigira akasiyana siyana enetiweki ekutenderera uye maOTT. Unogona kudhawunirodha iyo Pluto TV app paRoku uye kusaina kupinda kuti uone ako aunofarira anoratidza uye mafirimu. Neimwe nzira, iwe unogona kushanyira iyi link: pluto.tv/activate/roku uye shandisa Pluto TV paRoku uchishandisa kodhi ine manhamba matanhatu-inopihwa.
Gadzirisa Chinyorwa cheChromecast Chisingatsigirwe Nyaya pane Chombo Chako
6 Nzira dzekubatanidza Yako Android Runhare kuTV Yako
Ungachinja sei NAT Type paPC
Maitiro Ekuvharira Ads paCrunchyroll Yemahara
Kushanda paPluto TV kwave kuri kunetsa nyaya kwenguva yakati rebei . Kunyangwe sevhisi yatora matanho mazhinji ekuona kushanda kwakashama kwevashandisi vayo, vazhinji havagone kushandisa Pluto TV kune yayo yepamusoro mukana Nekudaro, nematanho ataurwa pamusoro, iwe unofanirwa kugadzirisa matambudziko mazhinji uye shandisa chikuva zviri nyore.
Tinovimba kuti mutungamiri uyu akabatsira uye iwe wakakwanisa shandisa Pluto TV . Kana iwe uchine chero mibvunzo maererano nechinyorwa chino, saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
6 Nzira dzekubatidza Tochi Pane Android Midziyo
Uri kutsvaga kuvhura Matochi pane yako Android kifaa? Iyo inokurumidza nzira ndeyekudhonza pasi ziviso pani wobva wadzvanya pane tochi icon kuti igone
Windows 10 cumulative update (KB5000822) inotadza kuisa vhezheni 1809
Heano maitiro ekugadzirisa kana Windows 10 Kuwedzera kuwedzeredza KB5000822 Yakaramba ichitarisa zvidzoreso, yakundikana kuisa nezvikanganiso zvakasiyana 0x800f0922, 0x8000ffff, 0x800f0826
Gadzirisa Microphone Isingashande paWindows 10
Yakagadziriswa: Mutyairi simba rehurumende kutadza BSOD pane Windows 10 20H2 kugadzirisa
Maitiro Ekudzimisa DEP (Dhata Kuuraya Kudzivirira) muWindows 10
3 Nzira dzekubuda kunze kweFacebook Messenger
Gadzirisa Snapchat Kamera Isiri Kushanda (Nhema Screen Nyaya)
Gadzirisa Steam iri Kunetsekana Kubatana neServer
Gadzirisa iPhone Isisiri Kuratidzira kumusoro muTunes yeWindows 10, 8.1 uye 7
Gadzirisa Google Calendar isingawirirane pane Android
Mhanyai DISM yekuraira mutsara Kugadzirisa uye Kugadziridza Windows system Mufananidzo 2020
Maitiro Ekudzima Skype uye Skype Akaunti
vpn haina kubatana neinternet kuwana
yangu bluetooth yakanyangarika windows 10
kubatana kwekure kure kwakarambwa nekuti zita rezita uye password windows 10
windows 10 nhema screen ine mbeva
maitiro ekuisa wifi icon pane taskbar